के दशैँ पछी फेरि लकडाउन हुन्छ ? – Suchana Hub
के दशैँ पछी फेरि लकडाउन हुन्छ ?
काठमाडौँ । नजिकिंदै गरेको दशैँलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यात्रा गर्नु अघि ७ दिन र गतव्यमा पुगिसेपछि थप ७ दिन अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने जनाएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले यस वर्ष महामारीको समय भएकोले गर्दा आफु भएकै स्थानमा बसेर चाडपर्व मनाउन र चाडपर्वका लागि व्यापार, व्यवसाय तथा यात्राका लागि भीड र संक्रमण फैलाउने कार्यहरू नगर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ ।
सरकारले चाडपर्वका बेला मानिसहरुले कम भन्दा कम यात्रा गरुन् भन्ने मनसायका साथ १४ दिन अनिवार्य क्वारिन्टन बस्नुपर्ने नियम लगाएको बुझिएको छ। यद्धपि सरकारका आदेशहरु नागरिक स्तरबाट पालना नभएको खण्डमा भने फेरि पनि लकडाउनको निर्णय गर्न सरकार बाध्य हुने चेतावनी पनि सरकारले दिएको छ।
दशैंमा काठमाण्डौबाट गाउँ जानेलाई नरोक्न तर गाउँ गएकाहरुलाई तुरुन्तै नफर्कानका लागी आग्रह गर्ने इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वप्रमुख डा. बाबुराम मरासिनीले बताउनुभयो।
Previous सिन्धुपाल्चोकबाट एक किलो नक्कली सुनसहित दुई जना पक्राउ
Next सडेको अवस्थामा भेटियो मृत गैँडा